လမ္းဆံု .....: သမိုင္းဆိုင္ရာ စာအုပ္စာတမ္းေဆာင္းပါးမ်ား
မြန်မာနိုင်ငံ (ဝါ) ဗုဒ္ဓသာသနာနဲ့ ပတ်သက်ဆက်နွှယ်နေတဲ့ သမိုင်းစာအုပ်များ။
ဗုဒ္ဓရောင်ခြည်တော်နှင့် ပုဂံမြို့ - ရွှေစကြာဦးစိုးမြင့်
၁၉၈၃ ခုနှစ်၊ ဧပြီလမှာ စပယ်ဦး စာပေဖြန့်ချိရေးမှ ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေတဲ့ ရွှေစကြာဦးစိုးမြင့် ရေးသားပြုစုတဲ့ "ဗုဒ္ဓရောင်ခြည်တော်နှင့် ပုဂံမြို့" စာအုပ် ဖြစ်ပါတယ်။ ဘကြီးတော် ဘုရား လက်ထက်က ပြုစုသော မှန်နန်းမဟာရာဇဝင်တော်ကြီးကို အဓိက ကိုးကားပြီး အစဉ်အလာ နှုတ်ပြော ပုဂံရာဇဝင်နဲ့ ပုဂံသို့ ဗုဒ္ဓသာသနာ ရောက်ရှိပြန့်နှံ့လာပုံ အကြောင်းကို ရေးသားပြုစုထားတဲ့ စာအုပ် ဖြစ်ပါတယ်။ အရွယ်အစား ၄၈၃ ကီလိုဗိုက် (483.0 kB) - ဖိုင်အမျိုးအစား ပီဒီအက်ဖ် (application/pdf)
မင်းတုန်းမင်း၏ဆောင်ကြာမြိုင်မှတ်တမ်း - ချစ်စိန်လွင်
၁-၇-၆၇-ခုနှစ်၊ ကျုံပျော်စာပေသိုက် ကန်တော်ကလေး၊ ရန်ကုန်မှ ဖြန့်ချိသောသမိုင်းစာ အုပ်တစ်အုပ်ဖြစ်ပါသည်။ ဤစာအုပ်ကို မြန်မာစာကထိကဦးမောင်မောင်တင်မှ အနက်ဖွင့် ပေးထားပါသည်။ ဖိုင်အရွယ်အစား(၁.၅၆)မီဂါဗိုက်။ (1.56)MB pdf file application.
မြို - အနောက်သား(စစ်တွေ)
၁-၁၁-၁၉၇၀-ခုနှစ်ထုတ် ရှုဒေါင့်ဂျာနယ်၌လာရှိသော လူမျိုးတစ်မျိုး၏အ​ကြောင်းဖြစ်ပါ သည်။ ဖိုင်အရွယ်အစား(၁၈၃)ကီလိုဗိုက်။ (183)KB Pdf file application.
၁၉၈၆-ခုနှစ်၊ မတ်လထုတ်၊ နှစ်(၃၀)မြောက် ပုလဲရတုအဖြစ်ထုတ်ဝေသော ဗုဒ္ဓဓမ္မလောက မဂ္ဂဇင်း၌လာရှိသော ​ဝေါဟာရဆန်းစစ်ချက် ဆောင်းပါးဖြစ်ပါသည်။ ဖိုင်အရွယ်အစား (၂၁၅)ကီလိုဗိုက်။ (215)KB pdf application.
နှစ်ပေါင်းလေးရာကျော်က မြန်မာနိုင်ငံ ဇောတိဂိုဏ်းအကြောင်း - ဓမ္မာစရိယဦးဌေးလှိုင်
ဓမ္မာစရိယဦးဌေးလှိုင်ရေးသားပြုစုသော ဓမ္မဒူတ(တတိယတွဲ)၌ပါရှိသော ဇောတိဂိုဏ်း၏အ ကြောင်းကို အများအလွယ်တကူ သိနိုင်စေရန် ရည်ရွယ်၍ ထုတ်နုတ်တင်ပြထားပါသည်။ ဖိုင်အရွယ်အစား(၁၀၂)ကီလိုဗိုက်။ (102)KB pdf file application.
ရွှေတိုင်းဌာနေ သု၀ဏ္ဏမြေ - အရှင်သောဘိတ(ကြွယ်လူး)
အများအငြင်းပွားနေသော သု၀ဏ္ဏဘူမိနယ်မြေအကြောင်း ဆန်းစစ်တင်ပြချက်ဆောင်းပါး ဖြစ်ပါသည်။ ၂၀၀၇-ခုနှစ်၊ မတ်လထုတ် သီတဂူဓမ္မမဂ္ဂဇင်း ဓမ္မအသံမှ ထုတ်နုတ်ယူ၍ တင်ပြ ထားပါသည်။ ဖိုင်အရွယ်အစား(၁၈၅)ကီလိုဗိုက်။ (185)KB pdf file application.
သရေခေတ္တရာသာသနာ၀င် - ဌေးလွင်(ဆားလင်းကြီး)
၁၉၈၄-ခုနှစ်၊ ဩဂုတ်လထုတ် ဓမ္မစာပဒေသာ၌လာရှိသော ဆောင်းပါးဖြစ်ပါသည်။ ဖိုင်အရွယ် အစား(၂၁၁)ကီလိုဗိုက်။ (211)KB pdf file application.
အနောက်ဘက်လွန်ကျေးဇူး - မောင်စင်ကြယ်
၃၁-၁-၁၉၇၀-ခုနှစ်ထုတ် ရှုဒေါင့်ဂျာနယ်၌လာရှိသော ​သမိုင်းဆောင်းပါးဖြစ်ပါသည်။ ဖိုင်အ ရွယ်အစား(၂၀၀)ကီလို​ဗိုက်။ (200)KB pdf file application.
ပျူနှင့်ပျူကျောက်စာများ သို့မဟုတ် ပျူခေတ်ဗုဒ္ဓသာသနာ - ဦးအောင်သိန်း(မန်းတက္ကသိုလ်)
၂၀၀၅-ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ(၁)ရက်နေ့၌ မန္တလေးမြို့ မောင်ထွန်းဘေပုံနှိပ်တိုက်တွင် ရိုက်နှိပ် ပြီး ရန်ကုန်အင်းစိန် ဇင်ရတနာစာပေမှ ထုတ်ဝေသည်။ ပျူသမိုင်းအကြောင်းကို အသေး စိတ် လေ့လာတင်ပြထားသော စာအုပ်ကောင်းတစ်အုပ်ဖြစ်ပါသည်။ စာအုပ်အရွယ်အစား (၁၄.၀)မီဂါဗိုက်။ (14)MB pdf file application.
ဟန်လင်းမြို့ဟောင်း - ငွေစန်းယုန်
၁၉၈၄-ခုနှစ် ဇူလိုင်လထုတ် စာပေလုပ်သားမဂ္ဂဇင်း၌လာရှိသော သမိုင်းဆောင်းပါးဖြစ်ပါသည်။ ဖိုင်အရွယ်အစား(၂၂၇)ကီလိုဗိုက်။ (227)KB pdf file application.
ဗိဿနိုးခေတ်နှင့်ယနေ့အ​မြင် - မောင်လွှမ်းမိုး
၁၉၆၉-၇၀-ခုနှစ်ထုတ် မန္တလေးတက္ကသိုလ်နှစ်လည်စာစောင်မဂ္ဂဇင်း၌လာရှိသော သမိုင်း​ ဆောင်းပါးဖြစ်ပါသည်။ ဖိုင်အရွယ်အစား(၂၂၂)ကီလိုဗိုက်။ (222)KB pdf file application
ရွှေဆင်က - ဦးမောင်မောင်တင်(မဟာဝိဇ္ဇာ)
၁၉၇၅-ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလထုတ် ရှုမ၀မဂ္ဂဇင်း၌လာရှိသော သမိုင်းယဉ်ကျေးမှုဆောင်းပါးဖြစ်ပါ သည်။ ဖိုင်အရွယ်အစား(၁၉၇)ကီလိုဗိုက်။ (197)KB pdf file application.
မျိုးပျောက်မှာ စိုးကြောက်မိတယ် - ခင်မြင့်(ဆကာကြီး)
၁၅-၂-၁၉၇၀-ခုနှစ်ထုတ်၊ ရှုဒေါင့်ဂျာနယ်၌လာရှိသော ပျောက်ကွယ်လုနီးနေပြီဖြစ်သော ကချင်ပြည်နယ်အတွင်းမှ လူမျိုးစုတစ်မျိုး၏အကြောင်းကို ဖော်ပြထားသောသတင်းဆောင်း ပါးဖြစ်ပါသည်။ ဖိုင်အရွယ်အစား(၁၈၉)ကီလိုဗိုက်။ (189)KB pdf file application.
သရေခေတ္တရာခေတ် ပျူဗုဒ္ဓ၀င်များ - မြင့်ဆွေ
၁၉၇၈-ခုနှစ်၊ ဧပြီလထုတ် မြ၀တီမဂ္ဂဇင်း၌လာရှိသော သမိုင်းဆောင်းပါးဖြစ်ပါသည်။ ဖိုင်အရွယ် အစား(၂၀၀)ကီလိုဗိုက်။ (200)KB pdf file application.
ပျူနှင့်ပြော့ - ဦးမြင့်အောင်
၁၉၈၄-ခုနှစ်၊ ဧပြီလထုတ် စာပေလုပ်သားမဂ္ဂဇင်း၌လာရှိသော သမိုင်းဝေါဟာရဆန်းစစ်ချက် ဆောင်းပါးဖြစ်ပါသည်။ ဖိုင်အရွယ်အစား(၂၀၀)ကီလိုဗိုက်။ (200)KB pdf file application
သီပေါမင်းနှင့်စာနှစ်စောင် - မောင်ကောင်းမြင့်
၁၉၇၂-ခုနှစ်၊ အောက်တိုဘာလထုတ် မြ၀တီမဂ္ဂဇင်း၌လာရှိသော သမိုင်းဆောင်းပါးဖြစ်ပါ သည်။ ဖိုင်အရွယ်အစား(၁၁၂)ကီလိုဗိုက်။ (112)KB pdf file application.
သီဟိုဠ်ဗုဒ္ဓသာသနာနှင့်ပါဠိစာပေသမိုင်း - ဦးမြင့်ဆွေ(မဟာဝိဇ္ဇာ-လန်ဒန်)
မန္တလေး-ရန်ကုန်ဗုဒ္ဓတက္ကသိုလ်ပြဌာန်းကျမ်းစာအဖြစ်ထုတ်သော သီဟိုဠ်ခေါ် သီရိလင်္ကာဗုဒ္ဓ သာသနာမိုင်းကြောင်းကို ဖော်ပြထားသည်။ စာအုပ်အရွယ်အစား(၈၄၅)ကီလိုဗိုက်။(845)KB pdf file application.
အိန္ဒိယပြည် ဗုဒ္ဓသာသနာသမိုင်း - ဦးမြင့်ဆွေ(မဟာဝိဇ္ဇာ-လန်ဒန်)
၁-၇-၂၀၀၄-ခုနှစ်တွင် ထုတ်ဝေသော မန္တလေး-ရန်ကုန်ဗုဒ္ဓတက္ကသိုလ်ပြဌာန်းကျမ်းစာအုပ်ဖြစ် ပါသည်။ စာအုပ်အရွယ်အစား(၄၅၆)ကီလိုဗိုက်။ (456)KB pdf file application.
ဓမ္မစေတီ - ​မစ္စတာမောင်မှိုင်း(သခင်ကိုယ်တော်မှိုင်း)
၁၉၆၉-ခုနှစ်၊ မတ်လ ရန်ကုန်မြို့ သံလွင်စာပေမှ ထုတ်ဝေသော သခင်ကိုယ်တော်မှိုင်းရေး သားသော ဓမ္မစေတီမင်းအကြောင်းကို ၀တ္ထုဇာတ်လမ်းအဖြစ် ဖတ်ချင်စဖွယ်ဖြစ်အောင် ရေးသားတင်ပြထားသော သမိုင်းနောက်ခံစာအုပ်ကောင်းတစ်အုပ် ဖြစ်ပါသည်။ စာအုပ် အရွယ်အစား(၂.၀၉)မီဂါဗိုက်။ (1.09)MB pdf file application.
ကုန်းဘောင်ခေတ်နှောင်း ရမည်းသင်းနယ်သာသနာရေး - ဦးမြင့်အောင်
၁၉၈၀-ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလထုတ် ရတနာမွန်ဓမ္မမဂ္ဂဇင်း၌လာရှိသော သာသနာရေးဆိုင်ရာ သမိုင်းဆောင်းပါး ဖြစ်ပါသည်။ ဖိုင်အရွယ်အစား(၆၂.၁)ကီလိုဗိုက်။ (62.1)KB pdf file application.
အလောင်းမင်းတရားကြီးနှင့်ကက်ပတိန်ဂျော့ဘေကာ - ဦးမြင့်ဆွေ
၁၉၈၁-ခုနှစ် ဇူလိုင်လထုတ် မြ၀တီမဂ္ဂဇင်း၌လာရှိသော သမိုင်းဆောင်းပါးဖြစ်ပါသည်။ ဖိုင်အ ရွယ်အစား(၈၇.၉)ကီလိုဗိုက်။ (87.9)KB pdf file application.
ရွှေတိဂုံကုန်းတော်ပေါ်မှ အင်္ဂလိပ်စစ်သင်းချိုင်း - မြင့်ဆွေ
၁၉၇၂-ခုနှစ်၊ နို၀င်ဘာလထုတ် မြ၀တီမဂ္ဂဇင်း၌လာရှိသော သမိုင်းဆောင်းပါးဖြစ်ပါသည်။ ဖိုင် အရွယ်အစား(၁၀၃)ကီလိုဗိုက်။ (103)KB pdf file application.
မိုင်းခိုင်းအတွင်း၀န် အရိုးအိုးဂူကျောက်စာ - မောင်မဲ
၁၉၈၅-ခုနှစ်၊ ဩဂုတ်လထုတ် ရတနာမွန်ဓမ္မမဂ္ဂဇင်း၌လာရှိသော သမိုင်းဆောင်းပါးဖြစ်ပါ သည်။ ဖိုင်အရွယ်အစား(၁၀၂)ကီလိုဗိုက်။ (102)KB pdf file application.
အီတလီဘုန်းကြီး ဆန်ဂျာမာနိုနှင့်မြန်မာ့အင်ပါယာစာအုပ် - မြင့်ဆွေ
၁၉၇၂-ခုနှစ်၊ အောက်တိုဘာလထုတ် မြ၀တီမဂ္ဂဇင်း၌လာရှိသော သမိုင်းဆောင်းပါးဖြစ်ပါ သည်။ ဖိုင်အရွယ်အစား(၁၀၉)ကီလိုဗိုက်။ (109)KB pdf file application.
သံဖြူဇရပ်နှင့်ဆက်စပ်နေသည့်သမိုင်းကြောင်း - နိုင်ပန်းလှ
၁-၁၂-၁၉၇၄-ခုနှစ်ထုတ် သံဖြူဇရပ် ရာပြည့်မဂ္ဂဇင်း၌လာရှိသော သံဖြူဇရပ်နဲ့ဆက်စပ်နေ သော သမိုင်းဆောင်းပါးဖြစ်ပါသည်။ ဖိုင်အရွယ်အစား(၁၁၅)ကီလိုဗိုက်။ (115)KB pdf file application.
သံဖြူဇရပ်စစ်သင်းချိုင်း - ရွှေဖြူ-စောစံထွန်း
၁-၁၂-၁၉၇၄-ခုနှစ်၊ သံဖြူဇရပ် ရာပြည့်မဂ္ဂဇင်း၌လာရှိသော ဆောင်းပါးဖြစ်ပါသည်။ ဖိုင်အရွယ် အစား(၆၃.၃)ကီလိုဗိုက်။ (63.3)KB pdf file application.
မန့်ခမ်းစေတီတော်သမိုင်း - မနုဿကျော်၀င်း
၁၉၈၀-ခုနှစ်တွင် နမ့်ခမ်းမြို့ သမိုင်း၀င် မန့်ခမ်းစေတီတော်ကို ဆရာမနုဿကျော်၀င်းမှ လေ့လာသုတေသနပြုထားချက်များကို မှတ်တမ်းတင်သည့်အနေဖြင့် စာအုပ်ထုတ်ဝေ ထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။ စာအုပ်အရွယ်အစား(၁၃၃)ကီလိုဗိုက်။(133)KB pdf file application.
ဘေသဇ္ဇဂုရု - ဒေါက်တာသန်းထွန်း
၁၉၈၀-ခုနှစ် စက်တင်ဘာလထုတ် ရတနာမွန်ဓမ္မမဂ္ဂဇင်း၌လာရှိသော သမိုင်းဆောင်းပါးဖြစ်ပါ သည်။ ဖိုင်အရွယ်အစား(၁၄၀)ကီလိုဗိုက်။ (140) KB pdf file application.
မြန်မာသူရဿတီ - ဒေါက်တာသန်းထွန်း
၂၀၀၁-ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလထုတ် သူရဇ္ဇမဂ္ဂဇင်း၌လာရှိသော ဆောင်းပါးဖြစ်ပါသည်။ ဖိုင်အရွယ် အစား(၄၅.၃)ကီလိုဗိုက်။ (45.3)KB pdf file application.
ပုဂံဂူကျောင်းတွေ အရှေ့အရပ်ကို မျက်နှာမူရင် ဘာသဘောလဲ - ဒေါက်တာသန်းထွန်း
၂၀၀၁-ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလထုတ် သူရဇ္ဖမဂ္ဂဇင်း၌လာရှိသော သမိုင်းသုတေသနဆောင်းပါးဖြစ်ပါ သည်။ ဖိုင်အရွယ်အစား(၃၄.၃)ကီလိုဗိုက်။ (34.3) KB pdf file application.
ပျောက်ဆုံးနေသော ပျူလူမျိုးများ ပြန်တွေ့ပြီ - ပျူဆရာရှိန်းဂေရှိန်း(မင်းတပ်)
၁၆-၆-၂၀၁၀-ခုနှစ်ထုတ် weekly Eleven ဂျာနယ် စာမျက်နှာ(၂၂)၌လာရှိသော ပျောက်ဆုံး နေသောပျူလူမျိုးများ အကြောင်းဆောင်းပါးဖြစ်ပါသည်။ ဖိုင်အရွယ်အစား(၂၁၉)ကီလိုဗိုက်။ (219)KB pdf file application.
အသောကနှင့်သု၀ဏ္ဏဘူမိ - မြင့်ဆွေ
၁၉၇၈-ခုနှစ်၊ မတ်လထုတ် မိုးဝေမဂ္ဂဇင်း၌လာရှိသော သမိုင်းဆိုင်​ရာလေ့လာချက်ဆောင်းပါး ဖြစ်ပါသည်။ ဖိုင်အရွယ်အစား(၈၀.၃)ကီလိုဗိုက်။ (80.3)KB pdf file application.
ဘကြီးတော်ဘုရားနှင့်ဆရာယုဒသန် - မြင့်ဆွေ
၁၉၇၁-ခုနှစ်၊ ဩဂုတ်လထုတ် ရှုမ၀ရုပ်စုံမဂ္ဂဇင်း၌လာရှိသော သမိုင်းဆောင်းပါးဖြစ်သည်။ ဖိုင်အရွယ်အစား(၇၆.၁)ကီလိုဗိုက်။ (76.1)KB pdf file application.
လန်ဒန်ပါဠိစာပေအသင်းကြီး - မြင့်ဆွေ
၁၉၈၁-ခုနှစ်၊ နို၀င်ဘာလထုတ်၊ ငွေတာရီမဂ္ဂဇင်း၌လာရှိသော ပါဠိပိဋကတ်တော်များကို အင်္ဂလိပ်ဘာသာသို့ ပြန်ဆိုသော အသင်းကြီး၏အကြောင်းဆောင်းပါးဖြစ်ပါသည်။ ဖိုင်အ ရွယ်အစား(၈၄)ကီလိုဗိုက်။ (84.1)KB pdf file application.
ရှေးဟောင်းတိဗက်-မြန်မာများနှင့် ယင်းတို့ရွှေ့ပြောင်းလာခဲ့သည့်လမ်းကြောင်းများ - ရည်စိန်
၁၉၆၉-၇၀-ခုနှစ်ထုတ် မန္တလေးတက္ကသိုလ်နှစ်လည်မဂ္ဂဇင်း၌လာရှိသော သမိုင်းသုတေသန ဆောင်းပါးဖြစ်ပါသည်။ ဖိုင်အရွယ်အစား(၂၅၅)ကီလိုဗိုက်။ (255)KB pdf file application.
တကောင်းနှင့်ပတ်သက်သော စစ်တမ်း - ရည်စိန်
၁၉၈၀-ခုနှစ်၊ ရတနာမွန်ဓမ္မမဂ္ဂဇင်း၌လာရှိသော သမိုင်းသုတေသနဆောင်းပါးဖြစ်ပါသည်။ ဖိုင်အရွယ်အစား(၁၉၆)ကီလိုဗိုက်။ (196)KB pdf file application.
ပျူတို့သည် မြန်မာနိုင်ငံတွင်းသို့ မည်သို့ ၀င်ရောက်လာခဲ့သနည်း - ရည်စိန်
၁၉၈၀-ခုနှစ်၊ နို၀င်ဘာလထုတ်၊ ရတနာမွန်ဓမ္မမဂ္ဂဇင်း၌လာရှိသော သမိုင်းသုတေသနဆောင်း ပါးဖြစ်ပါသည်။ ဖိုင်အရွယ်အစား(၂၄၆)ကီလိုဗိုက်။ (246)KB pdf file application.
ခရစ်နှစ်(၈ သို့မဟုတ် ၉)ရာစု ပျူမြို့တော် ဟန်လင်းလော၊ သရေခေတ္တရာလော - ရည်စိန်
၁၉၈၄-ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လထုတ်၊ ဉာဏ်လင်းဓမ္မစာပဒေသာမဂ္ဂဇင်း၌လာရှိသော သမိုင်းသုတေ သနဆောင်းပါးဖြစ်ပါသည်။ ဖိုင်အရွယ်အစား(၁၀၉)ကီလိုဗိုက်။ (109)KB pdf file application.
ပျူတပ်မြို့အချို့၏တည်နေရာ - ရည်စိန်
၁၉၈၄-ခုနှစ်၊ နို၀င်ဘာလထုတ် ဉာဏ်လင်းဓမ္မစာပဒေသာမဂ္ဂဇင်း၌လာရှိသော သမိုင်းသုတေ သနဆောင်းပါးဖြစ်ပါသည်။ ဖိုင်အရွယ်အစား(၈၁.၅)ကီလိုဗိုက်။ (81.5)KB pdf file application.
စိန့်တိုင်း(စိန့်ပြည်)၊ ဂန္ဓာလရာဇ်တိုင်း၊ ဥတည်ဘွား၊ တရုတ်တရက်ဟူသော အမည်များ၏ဇာစ်မြစ် - ရည်စိန်
၁၉၈၃-ခုနှစ်ထုတ် ဉာဏ်လင်းဓမ္မစာပဒေသာမဂ္ဂဇင်း၌လာရှိသော သမိုင်းသုတေသနဆောင်း ပါးဖြစ်ပါသည်။ ဖိုင်အရွယ်အစား(၂၇၉)ကီလိုဗိုက်။ (279)KB pdf file application.
သု၀ဏ္ဏဘူမိ၏တည်နေရာ - ရည်စိန်
၁၉၈၅-ခုနှစ်၊ ဧပြီလထုတ် ဉာဏ်လင်းဓမ္မစာပဒေသာတွင် လာရှိသော သမိုင်းသုတေသနဆောင်းပါး ဖြစ်ပါသည်။ ဖိုင်အရွယ်အစား(၂၄၀)ကီလိုဗိုက်။ (240)KB pdf file application.
ခရစ်နှစ်(၉)ရာစု ပျူနိုင်ငံ၏ပထဝီ၀င်အနေအထား - ရည်စိန်
၁၉၈၃-ခုနှစ်၊ နို၀င်ဘာလထုတ် ဉာဏ်လင်းဓမ္မစာပဒေသာ၌လာရှိသော သမိုင်းသုတေသနဆောင်း ပါးဖြစ်ပါသည်။ ဖိုင်အရွယ်အစား(၂၁၅)ကီလိုဗိုက်။ (215)KB pdf file application.
ဘီစီ ၂-ရာစုနှင့်အေဒီ ၄-ရာစုအတွင်း ရှေးတရုတ်တို့ သိခဲ့သော ပျူနိုင်ငံအမည်များ - ရည်စိန်
၁၉၈၄-ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလထုတ် ဉာဏ်လင်းဓမ္မစာပဒေသာ၌လာရှိသော သမိုင်းသုတေသနဆောင်း ပါးဖြစ်ပါသည်။ ဖိုင်အရွယ်အစား(၂၃၁)ကီလိုဗိုက်။ (231)KB pdf file application.
ရှေးတရုတ်တို့ သိခဲ့သော ပျူနိုင်ငံအမည်၊ ပျူ၀တ်နှင့်ဗြဟ္မ၀တ် - ရည်စိန်
၁၉၈၂-ခုနှစ်၊ ဖေဖေါ်ဝါရီလထုတ် ရတနာမွန်ဓမ္မမဂ္ဂဇင်း၌လာရှိသော သမိုင်းသုတေသနဆောင်းပါး ဖြစ်ပါသည်။ ဖိုင်အရွယ်အစား(၅၇.၈)ကီလိုဗိုက်။ (57.8)KB pdf file application.
ဗိဿနိုးမြို့ ဆိတ်သုဉ်းခဲ့သည့်အကြောင်းရင်း - ရည်စိန်
၁၉၈၀-ခုနှစ်၊ ဩဂုတ်လထုတ် ရတနာမွန်မဂ္ဂဇင်း၌လာရှိသော သမိုင်းသုတေသနဆေင်းပါးဖြစ်ပါ သည်။ ဖိုင်အရွယ်အစား(၂၆၂)ကီလိုဗိုက်။ (262)KB pdf file application.
မြန်မာဗိသုကာပညာရှင် ဦး၀င်းမောင်(တမ္ပ၀တီ)နှင့်တွေ့ဆုံမေးမြန်းခြင်း - ဇော်ဌေးလွင်
၂၀၀၉-ခုနစ်၊ ဇူလိုင်လ (၂၄)ရက်နေ့ထုတ် Bi Weekly eleven ဂျာနယ်တွင် ပါရှိသောသမိုင်း ဆိုင်ရာမေးမြန်းချက်ဆောင်းပါးဖြစ်ပါသည်။ ဖိုင်အရွယ်အစား(၁၆၅)ကီလိုဗိုက်။(165)KB pdf file application.
မောရိယခေတ်နိဂုံး - ဦးသန်းထွန်း​(ရွှေဘို)
၁၉၈၅-ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လထုတ် ဉာဏ်လင်းဓမ္မစာပဒေသာ၌လာရှိသော သမိုင်းဆောင်းပါးဖြစ်ပါ သည်။ ဖိုင်အရွယ်အစား(၂၂၆)ကီလိုဗိုက်။ (226)KB pdf file application.
တိုင်းကြီး(၁၆)တိုင်း - ဦးသော်ဇင်
၁၉၈၂-ခုနှစ်၊ ဖေဖေါ်ဝါရီလထုတ် ငွေတာရီမဂ္ဂဇင်း၌လာရှိသော သမိုင်းဆိုင်ရာဆောင်းပါးဖြစ် ပါသည်။ ဖိုင်အရွယ်အစား(၂၂၇)ကီလိုဗိုက်။ (227)KB pdf file application.
ရာမညတိုင်းတွင် သမိုင်း၀င်ခဲ့သော မွန်ခံတပ်မြို့ဟောင်း လှိုင် - သုံးဆယ်ထိဋ်တင်မြင့်
၁၅-၁-၁၉၇၀-ခုနှစ်ထုတ် ရှု​ဒေါင့်ဂျာနယ်၌လာရှိသောအိမ်ရှေ့စံကနောင်မင်းသား၏မိဖုရား လှိုင်ထိပ်ခေါင်တင် အခွန်စားခဲ့ရသောသမိုင်း၀င်မြို့ဖြစ်သော လှိုင်မြို့ကို ဆန်းစစ်သုတေ သနပြုထားသော ဆောင်းပါးဖြစ်ပါသည်။ ဖိုင်အရွယ်အစား(၁၆၆)ကီလိုဗိုက်။ (166)KB pdf file application.
ရှေးခေတ် အိန္ဒိယတက္ကသိုလ်များ - ဦးသန်းထွန်း(ရွှေဘို)
၁၉၈၁-ခုနှစ်၊ မတ်လထုတ် မိုးဝေမဂ္ဂဇင်း၌လာရှိသော သမိုင်းဆောင်းပါးဖြစ်ပါသည်။ ဖိုင်အ ရွယ်အစား(၁၉၀)ကီလိုဗိုက်။ (190)KB pdf file application.
မြန်မာရာဇ၀င်သုံးစောင်နှင့်သရေခေတ္တရာမင်းဆက် - ဒေါက်တာရီရီ
၁၉၇၅-ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလထုတ် ရှုမ၀မဂ္ဂဇင်း၌လာရှိသော သမိုင်းဆောင်းပါးသုတေသနလေ့ လာချက်ဖြစ်ပါသည်။ ဖိုင်အရွယ်အစား(၂၄၈)ကီလိုဗိုက်။ (248)KB pdf file application.
ယူဘီအိုင်ဦးဘသန်း၏ဘ၀အတွေ့အကြုံ - ဦးဘသန်း
၁၉၇၇-ခုနှစ်၊ ဩဂုတ်လထုတ် သွေးသောက်မဂ္ဂဇင်း၌လာရှိသော ခရီးသွားဆောင်းပါးဖြစ်ပါ သည်။ အခန်းဆက်ရေးသားထားခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ ဖိုင်အရွယ်အစား(၂၅၀)ကီလိုဗိုက်။ (250)KB pdf file application.
သိမ်သမုတ်ရာ၌ လူသတ်စတေးသလော - သတင်းစာဆရာဦးသိမ်းမောင်
၁၉၆၀-ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလထုတ် မြ၀တီမဂ္ဂဇင်း၌လာရှိသော သမိုင်းဆိုင်ရာဆောင်းပါးဖြစ်ပါ သည်။ ဖိုင်အရွယ်အစား(၂၂၁)ကီလိုဗိုက်။ (221)KB pdf file application.
အနော်ရထာအရင်က မြန်မာနိုင်ငံ - ဗိုလ်မှူးဘရှင်
၁၉၇၅-ခုနှစ်၊ ဖေဖေါ်ဝါရီလတွင် ရန်ကုန်မြို့ ဆွေဆွေမော်စာပေမှ ဒုတိယအကြိမ်အဖြစ် ထုတ်ဝေသော မြန်မာနိုင်ငံအနော်ရထာမင်းလက်ထက်မတိုင်ခင်က အ​ခြေအနေများကို လေ့လာသုတေသနပြုထားသော သမိုင်းစာအုပ်ကောင်းတစ်အုပ် ဖြစ်ပါသည်။ စာအုပ်အရွယ် အစား(၄၇၇)ကီလိုဗိုက်၊ (477)KB pdf file application.
ဗုဒ္ဓသမိုင်း(သို့မဟုတ်)အမှတ်တရဒိုင်ယာရီ ​- မေဃ၀တီဆရာတော်ဦးနာရဒ
ဤစာအုပ်သည် ကိုယ်တော့်ကရုဏာဇာတ်လမ်းတွဲများမှာ ပုံသဏ္ဌာန်အမျိုးမျိုးဖြင့် ပါ၀င် သရုပ်ဆောင်ခဲ့သည့် ဇာတ်လိုက်မင်းသားမေဃ၀တီဆရာတော်ဦးနာရဒ၏ စာပေများ အ နက် အကောင်းဆုံးစာပေလက်ရာတစ်ခု ဖြစ်ပါသည်။ လွန်ခဲ့သော ၁၃၁၃-ခုနှစ်၊ ဝါဆိုလ တွင် ပထမ အကြိမ်ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေခဲ့ခြင်းဖြစ်သဖြင့် ယခု ၁၃၇၃-ခုနှစ်တွင် စာအုပ်သက်တမ်း နှစ်(၅၀)ကျော်ခဲ့ပြီဖြစ်ပါသည်၊ အမျိုးဘာသာသာသနာအတွက် သူမတူအောင် စွမ်းဆောင် သွားခဲ့သောမေဃ၀တီဆရာတော်ဦးနာရဒ၏ဂုဏ်အလီလီကို ပုံဖော်ပူဇော်သောအားဖြင့် ဒုတိယအကြိမ်အဖြစ် ဆက်လက်ထုတ်ဝေလိုက်သော သမိုင်းစာအုပ်ဖြစ်ပါသည်။ စာအုပ်အ ရွယ်အစား(၂၈၇)ကီလိုဗိုက်။ (287)KB pdf file application.
အိန္ဒိယနိုင်ငံ သီပေါမင်းနန်းတော် - ဦးဩဘာသ(သာ၀တ္ထိမြန်မာကျောင်း-အိန္ဒိယနိုင်ငံ)
ခရစ်နှစ် ၂၀၁၀-ခုနှစ်၊ နို၀င်ဘာလ(၁၃)ရက်နေ့တွင် ကျရောက်သော အိန္ဒိယနိုင်ငံရှိ သီပေါ မင်း၏နန်းတော်သက် နှစ်(၁၀၀)ပြည့် အထိမ်းအမှတ်အဖြစ်ထုတ်ဝေသော သမိုင်းစာအုပ် ဖြစ်ပါသည်။ ဆရာတော်သည် သမိုင်းကြောင်းကို သေသေချာချာလေ့လာတင်ပြထားသော သမိုင်းစာအုပ်ကောင်းတစ်အုပ်ဖြစ်ပါသည်။ စာအုပ်အရွယ်အစား(၇.၀၄)မီဂါဗိုက်၊ (7.04)MB pdf file application. The book was scanned.
နန်းမတော်အတွက် နားပန်တော် - မောင်သန်းဆွေ(ထား၀ယ်)
၂၀၀၇-ခုနှစ်၊ ဖေဖေါ်ဝါရီလထုတ် သူရဇ္ဇမဂ္ဂဇင်း၌လာရှိသော နန်းမတော်မယ်နုရှင်းတမ်းအ မှတ်စဉ်(၁၅) သမိုင်းသုတေသနဆောင်းပါးဖြစ်ပါသည်။ ဖိုင်အရွယ်အစား(၆၁.၄)ကီလိုဗိုက်။ (61.4)KB pdf file application.
အောင်မြေဘုံစံအုဋ်ကျောင်းတော်ကြီးနှင့်ပတ်သက်၍ - မောင်သန်းဆွေ(ထား၀ယ်)
၂၀၀၇-ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လထုတ် သူရဇ္ဇမဂ္ဂဇင်း၌လာရှိသော နန်းမတော်မယ်နုရှင်းတမ်းအမှတ်စဉ် (၁၉)သမိုင်းသုတေသနဆောင်းပါးဖြစ်ပါသည်။ ဖိုင်အရွယ်အစား(၅၁.၆)ကီလိုဗိုက်၊ (51.6) KB pdf file application.
ရွှေစကြာ၏စာအုပ်မှ ဂိုဏ်းကြီးသုံးဂိုဏ်းဆိုသည်ကို ရှင်းခြင်း - မောင်သန်းဆွေ(ထား၀ယ်)
၂၀၀၇-ခုနှစ်၊ အောက်တိုဘာလထုတ် သူရဇ္ဖမဂ္ဂဇင်း၌လာရှိသော နန်းမတော်မယ်နုရှင်းတမ်း အမှတ်စဉ်(၂၂) သမိုင်းသုတေသနဆောင်းပါး ဖြစ်ပါသည်။ ဖိုင်အရွယ်အစား(၅၃.၇)ကီလိုဗိုက် ၊ (53.7)KB pdf file application.
ဖလ်နန်းရှင်နှင့်နန်းမတော်ဘုရားတို့၏အတောက်ပဆုံးအချိန်များ - မောင်သန်းဆွေ(ထား၀ယ်)
၂၀၀၇-ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလထုတ် သူရဇ္ဇမဂ္ဂဇင်း၌လာရှိသော နန်းမတော်မယ်နုရှင်းတမ်းအ မှတ်စဉ်(၂၄) သမိုင်းသုတေသနဆောင်းပါး ဖြစ်ပါသည်။ ဖိုင်အရွယ်အစား(၅၈.၃)ကီလိုဗိုက် (58.3)KB pdf file application
စလင်းစား နန်းလုရန် ကြံ မကြံ - မောင်သန်းဆွေ(ထား၀ယ်)
၂၀၀၇-ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလထုတ် သူရဇ္ဇမဂ္ဂဇင်း၌လာရှိသော သမိုင်းသုတေသနဆောင်း ပါးဖြစ်ပါသည်။ ဖိုင်အရွယ်အစား(၄၇.၅)ကီလိုဗိုက်။ (47.5)KB pdf file application.
ရဟန်းဘောင်၀င်ခဲ့သော ဂျပန်မင်းသား - ရည်စိန်
၁၉၈၆-ခုနှစ်၊ အောက်တိုဘာလထုတ် ရတနာမွန်ဓမ္မမဂ္ဂဇင်း၌လာရှိသော သမိုင်းဆောင်းပါး ဖြစ်ပါသည်။ ဖိုင်အရွယ်အစား(၄၈.၅)ကီလိုဗိုက်။ (48.5)KB pdf file application.
အင်္ဂလိပ်နှင့်စစ်ရှုံးရခြင်းသည် စလင်းစားကြောင့် ဟုတ်၊ မဟုတ် - မောင်သန်းဆွေ(ထား၀ယ်)
၂၀၀၇-ခုနှစ်၊ နို၀င်ဘာလထုတ် သူရဇ္ဖမဂ္ဂဇင်း၌လာရှိသော နန်းမတော်မယ်နုရှင်းတမ်းအမှတ် စဉ်(၂၃)ဖြစ်ပါသည်။ ဖိုင်အရွယ်အစား(၄၉.၄)ကီလိုဗိုက်။ (49.4)KB pdf file application.
သီပေါမင်းနှင့်ရွှေဘိုကိစ္စ - မကြန်
၁၉၇၉-ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လထုတ် ငွေတာရီမဂ္ဂဇင်း၌လာရှိသော သမိုင်းဆောင်းပါးဖြစ်ပါသည်။ ဖိုင် အရွယ်အစား(၄၆.၇)ကီလိုဗိုက်။ (46.7)KB pdf file application.
မြန်မာမင်းလက်ထက်တော် စာတမ်းများ - ဦးမောင်မောင်တင်(မဟာဝိဇ္ဇာ)
ပုဂံစာအုပ်တိုက်မှ ပထမအကြိမ်အဖြစ် ၁၉၆၇-ခုနှစ်တွင် ထုတ်ဝေသော သမိုင်းစာအုပ်ကောင်း ဖြစ်ပါသည်၊ သုတေသီများအတွက် အလွန်အဘိုးထိုက်တန်သော စာအုပ်ဖြစ်ပါသည်။ စာအုပ် အရွယ်အစား(၂၇၇)ကီလိုဗိုက်။ (277)KB pdf file application.
လှေသင်းတွင်း၀န်မင်းရဲ့အရေးကြီးပြီ​ သွေးစည်းကြစို့ - ရွှေဘိုမိမိကြီး
၂၀၀၀-ပြည့်နှစ် မြ၀တီမဂ္ဂဇင်း၌လာရှိသော ဆောင်းပါးကို ပြန်လည်ဖော်ပြထားပါတယ်၊ ဖိုင် အရွယ်အစား(၅၅.၆)ကီလိုဗိုက်။ (55.6)KB pdf file application.
ရန်ကုန်ဗဟိုထောင်ကြီး - မြင့်ဆွေ
၁၉၇၅-ခုနှစ်၊ ဩဂုတ်လထုတ် မြ၀တီမဂ္ဂဇင်း၌လာရှိသော ရန်ကုန်မြို့ရှိ ဗဟိုထောင်ကြီး၏ ဖြစ်ပေါ်လာပုံ သမိုင်းဆောင်းပါးဖြစ်ပါသည်။ ဖိုင်အရွယ် အစား(၄၈.၄)ကီလိုဗိုက်။ (48.4)KB pdf file application.
မင်းတုန်းမင်းခေတ် ကျောက်မျက်ရတနာတူးဖေါ်မှု - မောင်ကျော်၀င်း(မဟာဝိဇ္ဇာ)
၁၉၇၅-ခုနှစ်၊ ဩဂုတ်လထုတ် မြ၀တီမဂ္ဂဇင်း၌လာရှိသော မှတ်တမ်းသမိုင်းဆောင်းပါးဖြစ်ပါ သည်။ ဖိုင်အရွယ်အစား(၄၂.၅)ကီလိုဗိုက်။ (42.5)KB pdf file application.
နှစ် ၁၀၀ မှ စာချွန်တော်များ - ရန်အောင်
၁၉၇၄-ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လထုတ် ငွေတာရီမဂ္ဂဇင်း၌လာရှိသော နှစ်ပေါင်းတရာကျော်က မင်းတုန်း မင်းလက်ထက် စာချွန်တော်များကို လေ့လာသုတေသနပြုထားသောဆောင်းပါးဖြစ်ပါသည်။ ဖိုင်အရွယ်အစား(၅၃.၄)ကီလိုဗိုက်။ (53.4)KB pdf file application.
ကိုလိုနီခေတ်ဦး ပထဝီ၀င်စာအုပ် - မြင့်ဆွေ
၁၉၇၄-ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လထုတ် ငွေတာရီမဂ္ဂဇင်း၌လာရှိသော သမိုင်းဆောင်းပါးဖြစ်ပါသည်။ ဖိုင်အရွယ်အစား(၅၃.၈)ကီလိုဗိုက်။ (53.8)KB pdf file application.
ယဉ်ကျေးမှုကြေးမုံ - မနုဿကျော်၀င်း
၁၉၇၄-ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လထုတ် ငွေတာရီမဂ္ဂဇင်း၌လာရှိသော သမိုင်းဆောင်းပါးဖြစ်ပါသည်။ ဖိုင် အရွယ်အစား(၄၇.၆)ကီလိုဗိုက်။ (47.6)KB pdf file application.
လူမျိုးတစ်ရာတစ်ပါး - ကြူရတနာ မောင်မြကြိုင်
၁၉၇၉-ခုနှစ်၊ ဩဂုတ်လထုတ်၊ ငွေတာရီမဂ္ဂဇင်း၌လာရှိသော လူမျိုးတစ်ရာ့တစ်ပါးအကြောင်း သမိုင်းဆောင်းပါးဖြစ်ပါသည်။ အရွယ်အစား(၄၅၈)ကီလိုဗိုက်။ (458)KB pdf file application
၁၉၅၉-ခုနှစ် စက်တင်ဘာလတွင် ထုတ်ဝေသော စစ်ပညာဂျာနယ်တွင် အခန်းဆက်အနေနှင့် ပါရှိသော ဘာသာပြန်သမိုင်း ဆောင်းပါးတစ်ပုဒ်ဖြစ်ပါသည်။ ဖိုင်အရွယ်အစား(၉၃.၇)ကီ လိုဗိုက်။ (93.7)KB pdf file.
၁၉၈၅-ခုနှစ် နို၀င်ဘာလထုတ် ငွေတာရီမဂ္ဂဇင်း၌လာရှိသော သီပေါမင်းပါတော်မူပုံကို လင်္ကာ စပ်ဆိုထားသည့်အကြောင်းကို တင်ပြထားသောဆောင်းပါးဖြစ်ပါသည်။ ဖိုင်အရွယ်အစား (၁၂၇)ကီလိုဗိုက်။ (127)KB pdf file.
မက္ခရာမင်းသားကြီးထံမှ ပြန်စာ - ဒေါက်တာမျိုးသန့်တင်
၁၉၉၀-ခုနှစ်၊ မတ်လထုတ် စစ်ပြန်မဂ္ဂဇင်း၌ပါသော မက္ခရာမင်းသားကြီးသည် ဘင်္ဂလားအာရှ သိပ္ပံသုတေသနအသင်းကြီး၏ ဂုဏ်ထူးဆောင်အဖွဲ့၀င်အဖြစ် ခန့်အပ်ခံရခြင်း ဟုတ် မဟုတ်ကို ကျမ်းဂန်အကိုးအကားရှာဖွေပြီး ရှင်းလင်းသက်သေပြထားသော ဆောင်းပါး ဖြစ်ပါသည်။ ဖိုင်အရွယ်အစား(၅၈.၃)ကီလိုဗိုက်။ (58.3)KB pdf file.
မင်းခေါင်နော်ရထာကို ဗလမင်းထင်သည် ကြောက် မကြောက် - ညောင်ခါးရှည်မှိုင်းဝေ
၁၉၉၀-ခုနှစ်။ မတ်လထုတ် စစ်ပြန်မဂ္ဂဇင်း၌ပါသော ​ဖြေရှင်းချက် ဆောင်းပါးတစ်ပုဒ်ဖြစ်ပါသည်။ ဖိုင်အရွယ်အစား(၄၉.၁) ကီလိုဗိုက်။ (49.1)KB pdf file.
တိုင်းရင်းသားမြို - ဆဘောင်ထင်အောင်
၁၉၈၇-ခုနှစ်၊ (လ-မသိ)ထုတ် မြ၀တီမဂ္ဂဇင်း၌ပါသော မထင်မရှား ရှေးကျသော တိုင်းရင်းသား တစ်မျိုးဖြစ်သည့်မြိုတိုင်းရင်းသားအကြောင်းကို ရေးသားတင်ပြထားသော ​လူမျိုးစု ဆောင်းပါး ဖြစ်ပါသည်။ ဖိုင်အရွယ်အစား(၇၆.၁)ကီလိုဗိုက်။ (76.1)KB pdf file.
လင်(န်)ယန်(င်)နှင့်ဆက်စပ်သော ရှေးဟောင်းမြန်မာနိုင်ငံသမိုင်းတစ်ရပ် - ရည်စိန်
၁၉၉၉-ခုနှစ်၊ ဖေဖေါ်ဝါရီလတွင် ဒေါက်တာသန်းထွန်း(၇၅)နှစ်ပြည့် မွေးနေ့အထိမ်းအမှတ် အဖြစ် ပထမအကြိမ်ထုတ်ဝေခဲ့သော သန်းထွန်း​ ၇၅ မွေးနေ့လက်ဆောင်၊ ရှာရှာဖွေဖွေသမိုင်း အတွဲ(၂)စာအုပ်မှ ပြန်လည်ကူး​ယူဖေါ်ပြထား​ခြင်းဖြစ်ပါသည်။ ဤသမိုင်းဆောင်းပါးကို www.myanmarisp.com မှရယူပြီးပြန်လည်လွှင့်တင်ပေးထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။ ဖိုင်အရွယ် အစား(၃၈၇)ကီလိုဗိုက်၊ (387)KB pdf file.
ဟိုင်းကြီးကျွန်းအရေးအခင်း - မနုဿ
၁၉၈၆-ခုနှစ်၊ မေလထုတ် စန္ဒာရုပ်စုံမဂ္ဂဇင်း၌လာရှိသော ဟိုင်းကြီးကျွန်းကို အင်္ဂလိပ်တို့မည်သို့ ၀င်ရောက်၍ စိုးမိုးသိမ်းပိုက်လာပုံ၊ အလောင်းမင်းတရားကြီးဦးအောင်ဇေယျနှင့်မည်သို့မည်ပုံ ဆက်ဆံခဲ့ရပုံတို့ကို ရှင်းလင်းတင်ပြထားသော သမိုင်းဆိုင်ရာဆောင်းပါးဖြစ်ပါသည်၊ ဖိုင်အရွယ် အစား(၅၃.၉)ကီလိုဗိုက်။ (53.9)KB pdf file.
အချိန်မကျမီ တော်လှန်ခဲ့သောတပ်မှူးများ - ရဲဘော်ထွန်းမြိုင်
၁၉၉၀-ခုနှစ် မတ်လထုတ် စစ်ပြန်မဂ္ဂဇင်းတွင် ပါရှိသော ဖက်ဆစ်ဂျပန်တော်လှန်ရေးတွင် ဗိုလ်မှူးကြီးဗထူး နှင့်တပ်သားများတို့သည် သတ်မှတ်ထားသောအချိန်ထက် ကြိတင်စော၍ တော်လှန်ခဲ့ရသည့်အကြောင်းရင်းကို ရှင်းလင်းတင်ပြထားသော ဆောင်းပါးဖြစ်ပါသည်။ ဖိုင်အရွယ်အစား(၆၃.၅)ကီလိုဗိုက်။ (63.5)KB pdf file.
မြန်မာရာဇ၀င်မှတ်တမ်း - ဟံသာ၀တီဦးဘရင်
၁၉၆၈-ခုနှစ်၊ နို၀င်ဘာလတွင် ရန်ကုန်မြို့ ကျော်ဦးစာပေတိုက်မှ ထုတ်ဝေလိုက်သော မြန်မာနိုင်ငံ၏လွန် ခဲ့သော မင်းအဆက်ဆက်ကို ရာဇ၀င်ကျမ်းအစောင်စောင်တို့မှ ထုတ်နုတ်ယူပြီး စုဆောင်းတင်ပြရေးသား ထားသော သမိုင်းစာအုပ်ဖြစ်ပါသည်။ မြန်မာနိုင်ငံ ကိုလိုနီခေတ် အင်္ဂလိပ်လက်အောက်ခံဖြစ်သောအချိန် ကာလအထိ အချက်အလက်များပါ၀င်ပေသည်။ စာအုပ်အရွယ်အစား(၅၆၆)ကီလို​ဗိုက်၊ (566)KB pdf file.
အုန်းဘောင်သီပေါမြို့၏မဟာမြတ်မုနိဘုရားကြီးနှင့်ဝိဇယမာန်အောင်ကြေးစေတီတော် သမိုင်းစာတမ်း - History of Hsipaw Mahamyatmuni Pagoda
၂၀၀၄-ခုနှစ်တွင် ရေးသားပြုစုထားသော ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်း သီပေါမြို့၏မြို့ကျက်သရေဆောင် မဟာမြတ်မုနိဘုရားကြီး၏ဖြစ်ကြောင်းဂုဏ်အင် သမိုင်းစုံလင်ကို ရေးသားဖေါ်ပြထားသော ဘုရား သမိုင်းစာအုပ်ဖြစ်ပါသည်။ စာအုပ်အရွယ်အစား(၁.၄၀)မီဂါဗိုက်။ (1.40)MB pdf file.
၁၉၉၁-ခုနှစ် ဘော်ကြိုဘုရားသမိုင်းပြုစုရေးအဖွဲ့မှ ရေးသားထုတ်ဝေလိုက်သော ဘုရား သမိုင်းစာအုပ်ဖြစ်ပါသည်။ ဤစာအုပ်တွင် ဘော်ကြိုဘုရားစတင်ဖြစ်ပေါ်လာပုံ၊ နရ ပတိစည်သူမင်းကြီးမှ အသောကမင်းတရားကြီး (၉)တိုင်း(၉)ဌာန သာသနာပြုရာတွင် အပါ အ၀င်ဖြစ်သော ဘော်ကြိုဘုရားကြီးတွင် ကိန်း၀ပ်စံပယ်ရန်အတွက် စကားသား ဖြင့် ထုလုပ်ထားသော ဘုရားလေးဆူကို ရှမ်းမြန်မာချစ်ကြည်ရေးအလို့ငှာ ပေးပို့လှူ ဒါန်းခဲ့ပါသည်၊ ထိုဘုရားလေးဆူ၏သက်တမ်းမှာ ယခုအချိန်တွင် နှစ်ပေါင်း(၈၀၀) ကျော်ကြာမြင့်​ခဲ့လေပြီ၊ ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းတစ်လွှားတွင် အလွန်နာမည်ကြီးသော ဘုရားစေတီကြီးတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ စာအုပ်အရွယ်အစား(၂.၁၂)မီဂါဗိုက်။ (2.12)MB pdf file.
ယိုးဒယား-မြန်မာစစ်(ဇင်းမယ်ကို ယိုးဒယားတို့တိုက်ခိုက်စဉ်က) - ဗိုလ်မှူးဘရှင်
၁၉၆၁-ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလထုတ် စစ်ပညာဂျာနယ်တွင် အခန်းဆက်အနေနှင့် ဘာသာပြန် ထားသော သမိုင်းဆောင်းပါးဖြစ်ပါသည်။ အရွယ်အစား(၇၁.၅)ကီလိုဗိုက်။ (71.5)KB pdf file.
ယိုးဒယား-မြန်မာစစ်(ဟံသာ၀တီ(ပဲခူး)မြို့ကြီးပျက်စီး၍ တောင်ငူကို ယိုးဒယားဘုရင်တိုက်ခိုက်ခြင်း) - ဗိုလ်မှူးဘရှင်
၁၉၅၉-ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလထုတ် စစ်ပညာဂျာနယ်တွင် အခန်းဆက်အနေနှင့်ပါသော ဘာသာပြန်​သမိုင်းဆောင်းပါးဖြစ်ပါသည်။ ဖိုင်အရွယ်အစား((၇၅.၇)ကီလိုဗိုက်။ (75.7) KB pdf file.
ယိုးဒယား-မြန်မာစစ်(ထား၀ယ်မြို့ကို မြန်မာတို့တိုက်စဉ်က) - ဗိုလ်မှူးဘရှင်
၁၉၆၀-ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလထုတ် စစ်ပညာဂျာနယ်တွင် ပါသော အခန်းဆက်​ဘာသာပြန် ​သမိုင်းဆောင်းပါးဖြစ်ပါသည်။ ဖိုင်အရွယ်အစား(၈၇.၇)ကီလိုဗိုက်။ (87.7)KB pdf file.
မှန်နန်းကို ခုခံကာကွယ်ခြင်း - ကိုဝိဝိ
၂၀၁၀-ခုနှစ် ဖေဖေါ်ဝါရီလထုတ် စတိုင်သစ်မဂ္ဂဇင်း၌လာရှိသော The Asoka Society, Oxford မှ 1970 ခုနှစ်တွင် ထုတ်ဝေသည့်ဒေါက်တာထင်အောင်၏ Burmese History Before 1287: A Defence of the Chronicle မှနိဒါန်းကို ကိုဝိဝိမှ ြန်ဆိုခြင်းဖြစ်ပါ သည်။ မှန်နန်းရာဇဝင်ကို နိုင်ငံခြားသားတို့အမြင် မှားယွင်း စွာ ယူဆနေခြင်းအကြောင်းကို စိစစ်တင်ပြထားသော ဆောင်းပါးဖြစ်ပါသည်။ အရွယ် အစား(၉၉.၈)ကီလိုဗိုက်။ (99.8)KB pdf file.
ရတနာပုံခေတ်က ပုံနှိပ်ခဲ့သော ရှေးဟောင်းစာပေများတန်ဖိုး၊ ရသေ့ကြီးဦးခန္တီ၏သီတဥဏှသ​​​​​င်္ခေပဓါတုကျမ်း - နတ်မောက်ထွန်းရှိန်
၂၀၁၁-၂၀၁၂-ခုနှစ်အတွက် ထုတ်ဝေသော ​မန္တလေးမြို့ အောင်မြေမဂ္ဂဇင်း၌လာရှိသော စာပေတန်ဖိုးဆိုင်ရာကို ဖွင့်ဆိုပြသတင်ဆက်ထားသော ဆောင်းပါးဖြစ်ပါသည်။ အရွယ် အစား(၁၃၈)ကီလိုဗိုက်။ (138)KB pdf file.
This book was published by Revolutionary Council, April 30, 1962. File size is 2.41 MB pdf file.
စတုတ္ထစစ်လက်ရုံးမှ ထုတ်ဝေသည်။ ထုတ်ဝေသည့်နေရာနှင့်ခုနှစ်ကို မသိရပါ။ ဤစာအုပ်ထဲတွင် ကွန်မြူနစ် ပါတီပေါ်ပေါက်လာပုံ၊ ကွန်မြူနစ်များနှင့်ဗမာ့လွတ်လပ်ရေးကြိုးပမ်းမှု၊ ကွန်မြူနစ်များ၏လက်နက်ကိုင် သောင်းကျန်းမှု၊ ကေ-အန်-ဒီ-အို သောင်းကျန်းမှုသမိုင်း၊ ပအိုး-မွန်-မူဂျာဟစ်(မူဆလင်)သောင်းကျန်းမှု သမိုင်း အစရှိသည်တို့ကို စိတ်၀င်စားစွာဖြင့် ဖတ်ရှုရပေမည်။ စာအုပ်အရွယ်အစား(၃၈၄)ကီလိုဗိုက်။ File size (384)KB pdf file.
သိန္နီမြို့ ​စဝ်ကော်မိန်းဘုရားသမိုင်း - ဦးစာလိန္ဒ ရှာဖွေတင်ပြသည်
ထုတ်ဝေသည့်ခုနှစ်သက္ကရာဇ်ကို မသိရပါ၊ ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်း ကွတ်ခိုင်မြို့အလွန် မူဆယ်မြို့ မရောက်ခင် ကြားတွင် တည်ရှိသော ရှေးအခါက စော်ဘွားများ ထီးနန်းစိုက်ရာ သမိုင်း၀င်မြို့ကြီး တစ်မြို့ ဖြစ်ခဲ့သော သိန္နီမြို့တွင် ကိန်း၀ပ်စံပါယ်သော စဝ်ကော်မိန်းဘုရားစေတီသမိုင်းဖြစ်ပါသည်။ စာအုပ် အရွယ် အစား(၉၁.၃)ကီလိုဗိုက်။ File size (91.3)KB pdf file.
ပုသိမ် ၃၂ မြို့စစ်တမ်း - ဦး​ဧကျော်(သမိုင်းနည်းပြဆရာ-တောင်ကြီးကောလိပ်)
၁၉၇၀-ခုနှစ်ထုတ် တက္ကသိုလ်ပညာပဒေသာစာစောင် အတွဲ ၅ အပိုင်း၂ တွင်ပါရှိသော မြို့နယ်စစ်တမ်းသုတေ သနစာတမ်းဖြစ်ပါသည်။ စာအုပ်အရွယ်အစား(၁၃၈)ကီလိုဗိုက်။ File size (138)KB pdf file.
စတုတ္ထစစ်လက်ရုံးမှ ထုတ်ဝေသည်။ ဤစာအုပ်တွင် ကွန်မြူနစ် ရောင်စုံသူပုန်များကြောင့် နိုင်ငံတော်ကြီး ပျက်စီးဆုံးရှုံးနစ်နာရပုံကို တင်ပြထားသောစာအုပ်တစ်အုပ်ဖြစ်ပါသည်။ စာအုပ်အရွယ်အစား(၃၁၂)ကီလို ဗိုက်။ File size (312)KB pdf file.
မြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရပြန်ကြားရေးဌာနမှထုတ်ဝေပါသည်။ စာအုပ်အရွယ်အစား(၁၅၆)ကီလိုဗိုက်။ File size (156)KB pdf file.
စတုတ္ထစစ်လက်ရုံးမှ ထုတ်ဝေသည်။ ထုတ်ဝေသည့်ခုနှစ်ကို မသိရပါ။ စာအုပ်အရွယ်အစား(၃၁၉)ကီလို ဗိုက်။ File size (319)KB pdf file.
အင်းတော်ကြီးရွှေမဉ္ဇူဂန္ထဝင်ဘုရားသမိုင်းပေါင်းချုပ် - နေလင်း(အင်းတော်ကြီး)
၂၀၀၀-ခုနှစ် ဖေဖေါ်ဝါရီလတွင် ပဉ္စမအကြိမ်အဖြစ် မန္တလေးမြို့ ဒေါ်တင်ကြည်နှင့်သားများ ပုံနှိပ်တိုက်မှ ပြန်လည်ရိုက်နှိပ်ထုတ်ဝေလိုက်သော ကချင်ပြည်နယ်အတွင်းရှိ နာမည်ကျော်အင်းတော်ကြီးဘုရား(ရေလယ် ဘုရား)သမိုင်းကျမ်းဖြစ်ပါသည်။ ဤစာအုပ်တွင် အင်းတော်ကြီးနှင့်သိသင့်ဖွယ်ရာအချက်အလက်များ၊အင်း တော်ကြီး(အတ္ထုပ္ပတ္တိ)သမိုင်းဖြစ်စဉ်များ၊ ရွှေမဉ္ဇူစေတီတော်(ရေလယ်ဘုရား)သမိုင်းအချက်အလက်များ၊ အထက်ပါအကြောင်းအရာလေ့လာမှတ်သားဖွယ်ရာများ စုစည်းလျက် သမိုင်းမှတ်တမ်းရေးသားတင်ပြ ထားပါသည်။ စာအုပ်အရွယ်အစား(၁.၅၇)မီဂါဗိုက်။ File size (1.57)MB pdf file.
ဦးကုလား ပမာဒလေခအရေးအသားနှင့်ကျွန်တော့်အတွေ့အမြင် အတွေးအမြင် - ဒေါက်တာလှဘေ
၁၉၈၇-ခုနှစ် နို၀င်ဘာလထုတ် အတွေးအမြင်မဂ္ဂဇင်းတွင် လာရှိသောဆောင်းပါးကို ပြန်လည်စာစီရိုက် ထားပါသည်။ အရွယ်အစား(၁၁၈)ကီလိုဗိုက်။ File size (118)KB pdf file.
ဟံသာဝတီဆင်ဖြူရှင်၏ကုသိုလ်တော် ခေါင်းလောင်းစာလေ့လာချက် - ဦးတိုးလှ
၁၉၈၀-ခုနှစ် နို၀င်ဘာလထုတ် တက္ကသိုလ်ပညာပဒေသာ အတွဲ ၁၄ အပိုင်း ၆ တွင်ပါရှိသော သမိုင်းဆောင်းပါး တစ်ပုဒ်ဖြစ်ပါသည်။ ဤ သမိုင်းဆောင်းပါးတွင် လက်ရှိသမိုင်းစာအုပ်များတွင် အကိုးအကားမပြုခဲ့ရသေး သော အထောက်အထားတခုကို လေ့လာတင်ပြထားသည်။ သမိုင်းသုတေသီများအတွက် တန်ဖိုးရှိသော အချက်အလက်များပေးစွမ်းနိုင်ပေသည်။ အရွယ်အစား(၁၅၇)ကီလိုဗိုက်။ File size (157)KB pdf file.
၁၉၈၃-ခုနှစ်တွင် ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်များ ဗဟိုစာကြည့်တိုက်မှ ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေသည့်စစ်တမ်းသမိုင်းဖြစ်ပါသည်။ ၁၉၀၃-ခုနှစ်အတွင်း ပုဂံမြို့အုပ်မင်းဦးတင်အမိန့်ဖြင့် အရပ်ရပ်သူကြီးတို့တင်သွင်းသည့်စာများမှ စစ်တမ်းပါ သရွေ့ရွေးနုတ်၍ ၁၉၃၅-ခုနှစ် ဇူလိုင်လ ၂၁ ရက်နေ့၊ ၁၂၉၇-ခုနှစ် ဝါဆိုလဆုတ် ၇ ရက်နေ့ တနင်္ဂနွေနေ့တွင် ဆရာကြီးဇေယျ ရေးကူးထားသည့်လက်ရေးမူမှ ပြန်လည်ကူးယူထားသည်။ စာအုပ်အရွယ်အစား(၁.၈၃)မီဂါ ဗိုက်။ File size (1.83)MB pdf file.
၉၁ ဌာနအုပ်ချုပ်ရေး - ဒေါ်မြင့်မြင့်သန်း
၁၉၈၁-ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလထုတ် တက္ကသိုလ်ပညာပဒေသာစာစောင်၊ အတွဲ ၁၅၊ အပိုင်း ၅ ၌လာသောဆောင်းပါးသော ပြန်စာစီရိုက်ထားပါ သည်။ အရွယ်အစား(၁၉၃)ကီလိုဗိုက်။ File size (193)KB pdf file.
ကိုလိုနီခေတ် မြန်မာ့သမိုင်းအဘိဓာန်(Dictionary of Burmese in Colonial Period) - မြဟန်
ဖိုင်အရွယ်အစား(၆၆၇)ကီလိုဗိုက်။ File size (667)KB pdf file.
ရှေးဟောင်းသုတေသနဆိုတာ - သာထွန်းမောင်
၂၀၀၆ ခုနှစ် မန္တလေးရတနာပုံတက္ကသိုလ် နှစ်လည်မဂ္ဂဇင်း၌ ပါသော ဆောင်းပါးဖြစ်ပါသည်။ ဖိုင်အရွယ်အစား(၁၇၆)ကီလို ဗိုက်။ File size (176)KB pdf file application. uploaded by 24.6.2012.
The Making of Modern Burma - Thant Myint-U
          This book was published by The Pitt Building, Trumpington Street, Cambridge, United Kingdom. File size(1.12)MB pdf file application. Uploaded by 1.7.2012.
A Visit to the King of Burmah at Mandalay in october 1868- Rev.J.E.Marks
London. File size (1.01)MB pdf file application. Uploaded by 1.7.2012.
historical dictionary of burma - Donald M.Seekins
The Scarecrow Press, Inc. Lanham, Maryland • Toronto • Oxford, 2006. File size (2.19)MB pdf file application. Uploaded by 2.7.2012.
Superintendent, Government Printing, Rangoon, Burma, 1917. File size (1.44)MB pdf file application. Uploaded by 3.7.2012.
Baptists in Burma - Randolph L. Howard
Printed in U.S.A and published in May, 1931. File size (3.76)MB pdf file application. Uploaded by 3.7.2012.
Silk in Burma - J.P. Hardiman
ဤစာအုပ်သည် နှစ်ပေါင်းတစ်ရာကျော်သက်တမ်းရှိပြီဖြစ်ပါသည်။ Printed by Superintendent, Government Printing, Rangoon, Burma, 1901. File size (3.92)MB pdf file application. Uploaded by 4.7.2012.
Burma Relation with China - Edward Harper Parker
ဤစာအုပ်သည် နှစ်ပေါင်း(၁၅၀)နီးပါးရှိပြီဖြစ်သော စာအုပ်ဖြစ်ပါသည်။ Printed and published at the "Rangoon Gazette" Press, Burma, 1893. File size (4.29)MB pdf file application. Uploaded by 3.7.2012.
Burma; Gateway to China - H.G Deignan
City of Washington, Published by Smithsonian Institution, October 29, 1943. File size (4.74)MB pdf file application. Uploaded by 5.7.2012.
Constitutional Reform in Burma 1920
Printed and Published by His Majesty's Stationery Office, London, 1921. File size (1.02)MB pdf file application. Uploaded by 5.7.2012.
Notes on the ancient geography of burma vol.I - C. Duroiselle, M.R.A.S(Lecturer in Pali, Rangoon College)
Office of Superintendent, Government Printing, Rangoon, Burma, 1906. File size (1.79)MB pdf file application. Uploaded by 5.7.2012. ဤစာအုပ်သည် နှစ်ပေါင်းတစ်ရာကျော်သက်တမ်းရှိသောစာအုပ်ဖြစ်ပါသည်။
Pagan being the first connected account in english of the 11th century capital of burma - C.M. ENRIQUEZ, Captain, 21st Punjabis
Printed at the Hanthawaddy Press, Rangoon, Burma, 1914. File size (2.24)MB pdf file application. Uploaded by 5.7.2012. ဤစာအုပ်သည် ရန်ကုန်မြို့ ဟံသာ၀တီပုံနှိပ်တိုက်တွင် ၁၉၁၄ ခုနှစ်တွင် ရိုက်နှိပ်ထုတ်ဝေခဲ့ပါသည်။
Pagodas of Pagan - သီရိပျံချီဦးလူဖေဝင်း(ရှေးဟောင်းသုတေသန)
၁၉၆၆-ခုနှစ်တွင် ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေခဲ့သည်။ စာအုပ်အရွယ်အစား(၂.၃၇)မီဂါဗိုက်။ File size (2.37)MB pdf file application. Uploaded by (5.7.2012)
Geological Account ofaSeries of Animal and Vegetable Remains and of Rocks, collected by J. Crawfurd, Esq. onaVoyage up the Irawadi to Ava, in 1826 and 1827 - Reverend William Buckland, D.D. F.G.S. F.R.S. F.L.S., Professor of Mineralogy and Geology
SOAS Bulletin of Burma Research, Vol. 3, No. 2, Autumn 2005, ISSN 1479-8484, University of Oxford, (circa 1827). File size (168) KB pdf file application. Uploaded by 10.7.2012.
Note: John Crawfurd included in his 1827 account the notes and map made by M. Montmorency who accompanied the embassy. As Crawfurd introduced Montmorency's account: "The following description of the fortifications and site of the town was carefully, drawn up by my friend M. Montmorency, and will be readily understood byareference to the accompanying plan, laid down by the same gentleman." M.W.C., SOAS Bulletin of Burma Research, Vol. 3, No. 2, Autumn 2005, ISSN 1479-8484. File size (280)KB pdf file application. Uploaded by 11.7.2012.
Account of Rangoon in the Summer of 1826
Notes: During his stay at Rangoon in the summer of 1826, Crawfurd drew up his account of this town, although it was not published until he included it in his account of his embassy made to the Burmese court in 1827, which was published in 1829. As Crawfurd explains: "The following account of Rangoon was collected by me while I resided there in civil, charge of Pegu,aperiod of more than six months." M.W.C., SOAS Bulletin of Burma Research, Vol. 3, No. 2, Autumn 2005, ISSN 1479-8484. File size (101)KB pdf file application. Uploaded by 11.7.2012.
BURMA - Ma Mya Sein
Oxford University Press, 1944. File size (1.68)MB pdf file application. Uploaded by 11.7.2012.
The Development ofaMuslim Enclave in Arakan (Rakhine) State of Burma (Myanmar) - Aye Chan
Kanda University of International Studies, SOAS Bulletin of Burma Research, Vol. 3, No. 2, Autumn 2005, ISSN 1479-8484. File size (246)KB pdf file application. Uploaded by 12.7.2012.
Burma Down To The Fall Of Pagan. An Outline, Part I - G.H Luce and Pe Maung Tin
File size (799)KB pdf file application. Uploaded by 13.7.2012.
BIBLIOGRAPHIC MATERIALS, NOTICES, AND MAPS (I) Forthcoming Additions to the Bibliography of Burma/Myanmar Research
SOAS Bulletin of Burma Research, Vol. 3, No. 2, Autumn 2005, ISSN 1479-8484, In preparation for the yearly bibliographic supplement, readers are asked to submit recent publications (and old ones) that were not included in the previous year's edition. Since there are hundreds of publications on Burma each year, producingacomplete bibliography would be impossible without the help and cooperation of the Burma research community. When submitting entries, please follow the style of the bibliographic supplement. Please also note, that we do not include encyclopedia articles in the bibliographic supplement, but we will note them here for the notice of readers. Further, while we include forthcoming publications in this list, again for the notice of readers, these entries will not be included in the supplement until they have actually been published. M. W. C. File size (303) KB pdf file application. Uploaded by 13.7.2012.
The founding villages and early palaces of Bagan- an exploration of some chronicle and parabaik sources via computer mapping, field survey and archaeological excavation - Bob Hudson
2001 "Texts and Contexts" Conference, Yangon, December. Bagan is an urban centre in upper Myanmar. It reached its peak in terms of the construction of religious monuments and political dominance over the upper Ayeyarwady valley region between the 11th and 13th centuries AD. The origin of the city, or at least the origin of settlement in the general area that later became Bagan, is traditionally attributed toaconfederation of nineteen villages dated to 107 AD1. The first part of this paper summarises some recently collected data, ranging from chronicle descriptions and oral history to archaeological survey and excavation, which has pinpointed many of the claimants for founding village status2. It must be stressed that these are contenders whose claims remain to be tested by further historical and archaeological study. File size (289)KB pdf file application. Uploaded by 17.8.2012.